China tsika yechiso dhinda pachena hapana mhando nyoro varume yakakosha kutenderera mutsipa heather ruvara tri-sanganisa t shati fekitori uye vagadziri | Chiono
tsika yechidzitiro inodhinda pachena hapana mhando nyoro varume yakakomberedza mutsipa heather ruvara tri-musanganiswa t shirt
1.Sei triblend t shati iri kupisa kupisa? Kana mutengi wangu achitsvaga rairo yekusarudza zvinhu zvekuita t shirt yenguva dzose, ndine chokwadi chekuzvikurudzira. Kana iwe ukandibvunza kuti sei, ini ndaikuudza kuti triblend tee ndicho chinhu chakapfava chaungambobata.
2.Iyi tsika tsika-yakasanganiswa t-shirts ndeye polyester, donje, uye rayon musanganiswa. Iwo ese ari maviri akapfava uye akapusa akareruka, achiuya mukati chete 140gsm gobvu, mune yakanakisa inoyevedza heather kutarisa. Iyo micheka yakasanganiswa inosanganisa kugadzikana ne silky yakatsetseka nyaradzo kupfeka. Polyester inochengetedza chimiro uye kusimba; Ikotoni inokweretesa kunyaradzwa nekusimba; Rayon inogadzira yakasarudzika dhizaini; Yakakwirira skrini yekudhinda mhedzisiro; Yakatetepa yakaenzana kupfuura yenguva dzose dhizaini tee.
Zvadaro: tsika kudhinda isina chinhu polyester inomhanya t shirt logo
China Fekitori T Shirt